3 Baadhitaan Oo Ay Waajib Ku Tahay Nin Kasta Inuu Si Joogto Ah U Sameeyo Si Uu Caafimaadkiisa U Hubiyo - Daryeel Magazine
3 Baadhitaan Oo Ay Waajib Ku Tahay Nin Kasta Inuu Si Joogto Ah U Sameeyo Si Uu Caafimaadkiisa U Hubiyo
Waxaa jira shaybaadho caafimaad oo ay waajib tahay in nin kastaa uu sameeyo si uu u ogaado haddii ay hayaan xanuunno ay muhiim tahay in la ogaado inta ay bilowga yihiin, maadaama oo ay yihiin kuwo xilligaas si sahal ah oo dhaqso badan wax looga qaban karo. Qormadan oo aynu Afsoomaali usoo rognay waxa ay saddexdaas baadhitaan ee caafimaadka ninka la xidhiidha ku sheegtay kuwan:
1. Waa in uu si joogto ah oo waqtiyeysan uu u baadhaa dhiig-karka: Waxaa dunida si xawli ah oo muuqata ugu soo badnaya ragga qaba cudurka wadne xanuunka oo ah sababta ugu weyn ee ay rag aad u badani dunida maanta ugu dhintaan. Haddaba dhiig karku maadaama oo uu ka mid yahay sababaha waaweyn ee keena wadne xanuunka, isla markaana ragga uu dhiig-karku ku badan yahay, waxaa lagula talinayaa nin kasta in uu si joogto ah oo weliba waqti go’an ah uu u hubiyo xaaladda wareegga dhiiggiisa, (In uu dhiigkar qabo iyo in kale).
2. Ninku waa in uu si joogto ah ula socdaa heerka Gulukoosta (Glucose) dhiiggiisa ku jirta: Sonkorta ama Guluukoosta dhiigga aadamaha ku milani waxa ay u fiican tahay caafimaadka guud ahaaneed ee qofka, laakiin waxaa muhiimad weyn leh in ay ahaato heerka dabiiciga ah ee uu dhiiggu qaadi karo, haddii ay ka korodhana waxa ay keentaa khataro caafimaad oo tiro badan.
3. Shaybaadhka qanjidhka Prostate ka loo yaqaanno: Qanjidhka manida oo Afka qalaad lagu yidhaahdo Prostate waa qanjidh ragga ku jira oo sameeya dareeraha isu keena qayb ka mid ah manida. Qanjidhkan oo ku yaalla meel ku beegan sinaha ninku waxa uu isticmaalaa hormoonka lab ee loo yaqaanno Testosterone, kaas oo aanu la’aantii si caadiya u shaqayn karin. Qanjidhkani waxa uu inta badan halis u yahay nooc kansarka ka mid ah oo isaga si gaar ah u abbaara, gaar ahaan marka ay da’da ninku weynaato.
Ka Faaidayso Dhakhtarka: Talooyin Anfacaya Qof Kasta Oo Doonaya Inuu Miisaanka Iska Dhimo 6 Sababood Oo Qofka U Nugleeya Dhaxanta, QABOW JOOGTO AH OO AAD DAREENTAA WAA CALAAMAD CAAFIMAAD DARRO Caadooyin Cunto Oo Ku Haboon Inuu Raaco Qofka Doonaya Inuu Miisaanka Dhimo